"Kandahar", "Piranha", "Izingane ezingaphansi 16" - kunzima ukuba uhlu zonke amafilimu emangalisayo, sibonga ngalo ungazenza nomqondisi owaziwayo Andrei Kavun. Iminyaka 46 master ephethwe ukususa cishe eyishumi sici amafilimu kanye uchungechunge TV, ukuhlola amandla abo njengoba nesazi umlingisi. Yini esiyaziyo ngalo muntu abanamakhono, yimuphi umsebenzi bangaziqhayisa?
Andrew Kavun: esakhula
Umqondisi abadumile esizayo wazalelwa emzini Ukraine Lviv, kwenzeka ngo-December 1969. Andrew ngokushesha esiphethweni umgomo wayo abasiza yokuthi umsebenzi professional abazali bakhe ukuthi kuhlobane ngokuqondile emhlabeni cinema. Lo mfana ezama ngangokunokwenzeka ukuze bachithe isikhathi esincane ukufunda, njengoba ayephethe ezicini eziningi zokuzilibazisa.
Yini ayenza eminyakeni Andrew Kavun esikoleni? abaqondisi Ikusasa nabalobi bathandile ukufunda izincwadi, ukubhala kanye ukuqopha izindaba zabo athakazelisayo zafundwa zasekilasini lakhe. Yiqiniso, umxhwele izwe okuyimfihlakalo ebhayisikobho, zazo umfana ayefuna kube. Kuyaziwa ukuthi ekugxiliseni kuye kwenziwa i-ifilimu adventure "Pirates kwekhulu lama-20."
Emva kokuthola isitifiketi, Andrei Kavun abazinikezele ebuthweni lezempi iminyaka emithathu, lapho bathola okuhlangenwe nakho njengoba itilosi. Khona-ke le nsizwa yahamba enhlokodolobha ukuba ahlasele le VGIK. Andrey ngempumelelo lidlule mncintiswano yokudala, kwaba inkambo ezaholela uVladimir Hotinenko.
Kuyaziwa ukuthi umfundi Kavun isikhathi ukuhlola amandla abo njengendlela nigger tetemibhalo, lo msebenzi eyamdonsela kwasekuqaleni kungenzeka ukumbamba imali. Njengoba yena kuhlangene izifundo zakhe ababhala amanoveli, kodwa kamuva wababhubhisa labo imisebenzi, wamdumaza kanjani kubo. Nokho, umqondisi Akazisoli isikhathi esichithwa, njengoba okuhlangenwe nakho ukubhala emisebenzini yakhe siqu kusiza kube lula ngaye ukuba abe nobuhlobo isidingo izinguquko kule ndaba adalwe kuye. Kwenzeka inqaba, iskripthi zabo nabanye ubhekisela imidwebo for imidwebo esizayo.
Eyokuqala impumelelo enkulu
Andrew Kavun - umqondisi, ogama umgwaqo nodumo waqala nge-TV iphrojekthi "Labaqalayo". Nakuba besebenza kukho, inkosi wazikhandla ukuze uthumele izici kwenkathi eyayibonakala emsebenzini oluchaza Todorovski, "Khumbula - ungakhumbuli", okwakubekelwa lathathwa esiqintini chungechunge. Ngingalindele, ungumdali umbukiso iye yatha- esikhulu nesesilo Kavun wathandwa izinhliziyo abalandeli yayo yokuqala.
"Piranha" - isinyathelo movie, okuyiwona U-Andrew wayeziqhenya ku esimemweni Valeri Todorovski. protagonist le filimu --ejenti ekhethekile Kirill Mazur, indima wabelwa Vladimiru Mashkovu. Uhlamvu kuyimfihlo ongaqondakali uphiko oluyisipesheli "Piranha", ogama abaholi wathumela kuye eSiberia nge mission esiyingozi. Yiqiniso, umlingiswa oyinhloko ihlanganyela co ebukekayo Olga ngu Svetlana Antonova. Uzungu tape ethathwa inoveli Aleksandra Bushkova, isimo movie letinikwe lapha ngenhla.
"Kandahar" - edume kunazo ifilimu iphrojekthi nalabo ababelandela Andrei Kavun. Filmography umqondisi usezuze Isendlalela sale drama ngo-2010, kuyathakazelisa ukuthi icebo iribhoni lathathwa empilweni yangempela. I Igxila misadventures abashayeli bezindiza isiRashiya, njengoba isiphetho ngabe asewile ebugqilini amaphekula Islamic. Liberation ingozi kwadingeka alinde isikhathi esingaphezu konyaka.
Uma ukholelwa ukuthi amazwi umqondisi, lifilimu isithombe lalotshwa kuye ngokuhambisana ngokuqinile izindaba iqhaza lezi zenzakalo uVladimir Sharpatova. Interview kwalokho wathatha umshayeli, esalibele izinsuku ezintathu. Ngisho nezinto ezincane ungazange uzitshiwe. Sharpatov mathupha wahosha uhlelo etilongweni, uPetru etshela mayelana imizwa obhekana nazo. Konke lokhu kubonakala ifilimu, ogama isabelomali lidlule zamadola kwezigidi eziyisikhombisa.
Kuyaziwa ukuthi le bhayisikobho eyayenziwe eMorocco ezaziwayo. Ngenkathi ubhala script kanye ukuqopha idrama Kavun igxile hhayi phezu izigcawu ezinobudlova, futhi nakho engaphakathi izinhlamvu, umzabalazo wabo ne ukudalelwa futhi kithi ngokwethu. tape Star uVladimir Mashkov, nabo umqondisi kwadingeka isikhathi ukusebenza ngaphambili. Lo mlingisi kudlalwa umholi angakahleleki abashayeli esengene enkingeni, ukuphupha silingo comrades ekuthunjweni uyaphila futhi alimale.
"Izingane ezineminyaka engaphansi 16"
Yiqiniso, uhlu ngenhla akuyona yonke okufanelekelayo ukuba amaphrojekthi ifilimu nezinhlelo ze-TV, ungumdali okungukuthi Andrey Kavun. Biography umqondisi kufakazela ukuthi ifilimu yakhe "Izingane ezingaphansi 16" futhi wasamukela ngezandla ezifudumele izilaleli futhi baxgeki. Sibe master esihle wobusha idrama, esehlanganise zonke izingqinamba ezibhekene ingane yesimanje.
Idrama omkhulu imibukiso esakhula, okuyinto eyenzeka ngo-bonke abafundi. Ungahlali ngaphandle ukunakwa iphethini abenzi nakho lokuqala romantic, ngoba kunzima ukuhlukanisa ukwaziswa okulethwa yizinzwa yangempela. Phakathi kukhona intsha ezine, ngamunye wabo umlando walo othakazelisayo. Ekhuluma ewukuhlakanipha okwenziwe umbhali ngalesi sikhathi ayihlelwa ngumqondisi yena, umsebenzi esiphathiswe Oleg Kavun Malovichko, yena abhekana lolungenamaphutsa nalo.
Yini enye ukubona
Andrew Kavun, ogama izithombe kungabonwa esihlokweni, eyaziwa nangokuthi i-umdali yephrojekthi TV "Sherlock Holmes." Maitre ufuna ukuthola show emuva ngo-2008, kodwa nazo ngezimali nobunzima kwamphoqa ukuhlehlisa umsebenzi iminyaka embalwa. Indima Holmes umbukiso kwaba umlingisi abanamakhono Igor uPetrenko, nomsizi wakhe othembekile Watson lolungenamaphutsa eyadlalwa Andrei Panin. Sithathe iqhaza ukuqopha yochungechunge kanye nezinye izinkanyezi: Boyarsky Dapkunayte.
Andrew Kavun, ethula TV iphrojekthi umphakathi ngo-2013, izishaya isifuba ngevolumu umsebenzi wenzeke. Umqondisi ephethwe ukuheha ukuthwetshulwa abadlali abanamakhono, ngamunye kuwo wakwazi ukuzizwa ubuntu bakhe futhi akwethule ekukhanyeni ezithakazelisayo kakhulu. Susa Sherlock Holmes uchungechunge khona iphupho endala womculo, ngubani bayahlonishwa lokhu uhlamvu njengoba ingane. Yiqiniso, hhayi ngaphandle izithiyo ezingalindelekile, isibonelo, ukunyakaza umbhikisho ihlelwe yi- "Amakhomanisi Petersburg" party. Abahlanganyeli akhuthazwa ukuba ashiye wedwa legend of "Lenfilm" futhi senqabe ukudala "mbumbulu".
Umlingisi Adrian Rodriguez: Filmography
Aleksandr Tsoy - indodana kuphela Viktora Tsoya
Zhostovo ugqoko: umlando kanye nezindlela ukwenziwa. Umdwebo Zhostovo ku emathileyi
Ngingaba ukuthatha izidakamizwa 'Oscillococcinum' ngenkathi ibele?
Imbongolo Olubomvu ingane: yini okufanele uyenze? Ubangela abapristi ububomvu ngesikhathi ingane
Izinkinga emvelweni Russian ehlane arctic